१ अर्ब TP टी १ कमाइएको पाठ: एमएएफ ले धेरै चाँडो सार्दछ
lending8 मा अक्टोबर 3, 2014 द्वारा लिखित।
मसँग सामेल हुनुहोस् जब म एमएएफमा मेरो योगदानको माध्यमबाट ११ पाठहरू कमाउन प्रयास गर्दछु
जीवनको अझ राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न प्रत्येक महिना जाँच गर्नुहोस् MAF मा भर्खरको ग्रेडको आँखा मार्फत उनको अर्को क्यारियर चरण पत्ता लगाउन खोज्दै!
MAF धेरै छिटो चालमा चल्छ: यदि तपाइँ एकपटक र केहि समय रोक्नुभयो र योगदान नदिनुभयो भने, तपाइँले यसलाई याद गर्नुहुनेछ।
म हास्यको ठूलो प्रशंसक हुँ। र जोन ह्युजेस। त्यसोभए मेरो पहिलो दिन जब सबैले मलाई "चीजहरू यता चाँडो यता वरिपरि घुम्छन्" भनेको छ, मैले तुरून्त सोचेँ फेरिस बुलर.
जहाँसम्म म केवल दुई हप्ता को लागी MAF मा भएको छु, म देख्न सक्छु यो कथन वास्तवमै कत्तिको सत्य छ। पहिलो दिनदेखि, म "आगोमा फालियो"। म बैठकहरूको पहिलो सेटमा बसेँ भनेर आशा गर्दै मलाई "वेधशाला" को भूमिका खेल्ने थियो।
तर एमएएफमा पछाडि बस्न र हेर्नको लागि समय छैन। हामी एक विचारको साथ आएपछि, हामीले यसलाई सुधार गर्ने उपायहरू विश्लेषण गरिसकेका छौं र नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने बीचमा छौं।
एमएएफ परम्परा अनुसरण गर्दै, अपर्णा (अर्को नयाँ क्षेत्र फेलो), र मैले MAF स्टाफको हरेक सदस्यलाई भेट्न समय निकालेँ। यी एक-मा शुद्ध सूचना को रूपमा शुरू भयो - केहि कार्यक्रमहरू कसरी काम गर्छन्? हाम्रा साथीहरू को हुन्? - र चाँडै नै पूर्ण विचार मंथन सत्रहरूमा morphed।
मैले ठूलो तस्विरको कल्पना गर्न शुरू गरें, कसरी एमएएफमा बिभिन्न विभागहरू आपसमा सम्बन्धित छन् र आफैंले सञ्चारलाई बढावा दिन सक्ने तरिकाहरू खोजिरहेको भेट्टाए।
यो मेरो पहिलो कार्य थियो, र त्यो मा एक धेरै साधारण एक, तर मेरो लक्ष्य यति अचानक र जैविक परिवर्तन भयो। के एक पटक मा एक धेरै निष्क्रिय गतिविधि मेरो पहिलो परियोजना प्रस्ताव मा बदलियो जस्तो देखिन्थ्यो - सबै यहाँ भएको मात्र दुई दिन भित्र।
कुनै पनि नयाँ आगमनको लागि, विशेष गरी म जस्तो नयाँ फ्रि-अफ-द-ग्रिड ग्रेड, भित्र आएर आफ्नो प्रोजेक्टको दायरा बाहिर नयाँ प्रस्ताव बनाउने सोचाइ डरलाग्दो हो-तपाईं-निकालिएको-सर्वत्र रणनीति जस्तो देखिन्छ। तर एमएएफमा, यो प्राकृतिक मात्र होइन; यो महत्वपूर्ण छ।
एक अपेक्षाकृत नयाँ कम्पनी को रूप मा MAF धेरै तरिकामा एक स्टार्टअप जस्तै संचालन गर्दछ, मतलब त्यहाँ क्षेत्रहरू छन् जहाँ सफलताको लागि कुनै रुब्रिक छैन। जे भए पनि, हामी छायाँ बाहिरबाट रोक्न नसक्ने अन्यथा unaddressed मुद्दालाई समाधान गर्न कोशिस गर्दैछौं; पछ्याउन कुनै कुटेको मार्ग छैन।
केहीले यसलाई चिन्ताजनक देख्न सक्छन्, र यो पक्कै कहिलेकाँही मेरो लागि हो। जहिले पनि तपाई जानुहुनु भएको दिशालाई थाहा नहुनु पक्कै कठिन कार्य जस्तो देखिन सक्छ। यद्यपि यो पनि धेरै सान्त्वनादायी छ। कडा प्रक्रियाहरू बिना समय बुझ्न खर्च गर्न, म छिट्टै र कुनै प्रश्न बिना मेरो आफ्नै विचारहरू इंजेक्ट गर्न सक्दछु।
एमएएफमा, हामीले समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका गाह्रो समस्याहरूका जवाफहरू अस्पष्ट छन्, तर तिनीहरूलाई उत्तर दिनको लागि आवश्यक छ।
यस्तो अवस्थामा हिचकिचावट आउन सक्छ। प्राय जसो धेरै समय सम्म म कुनै विचारमा बस्छु, मलाई यसको अनुसरण गर्न अधिक लामो हुन्छ। एक पटक मैले गरेपछि, समय बितिसकेको छ र समाधान अप्रचलित छ। यसैले निरन्तर चलिरहनु पर्ने आवश्यकताले हामीलाई राम्रो कामदार, राम्रो चिन्तक र उत्तम मानिस बनाउँछ। अन्तिम इनाम, यद्यपि, एक तात्कालिक एकता हो जुन अनिवार्य रूपमा यस मानसिकतामा भाग लिएर उत्पन्न हुन्छ।
आउट-अफ-द-बक्स मार्गहरूमा योगदान गरेर र-बाहिर-बाकस सोचसहित, म अन्जानमा टिमको हिस्सा भएँ र संस्कृतिको साथ एक भयो। यो मानसिकताले MAF लाई टिक बनाउँदछ र यदि तपाईं बोर्डमा छिटो उफ्रिनुहुन्न भने, तपाईंले सवारी याद गर्नुहुनेछ।